Cwangcisa iqela lokuhlela | Indlela yokupheka
Ukuphinda ungene kwakhona yi iwebhusayithi malunga neeresiphi zokupheka ezilungiselelwe abantwana ngokukodwa. Ingxaki eqhelekileyo kuninzi loomama kuxa kulungiswa imenyu yosuku ngalunye. Ndipheka ntoni namhlanje? Ndikwenza njani oko abantwana bam batya imifuno? Ndingayilungiselela njani i ukutya okunesondlo kunye nokunempilo kubantwana bam? Ukuphendula loo mbuzo neminye emininzi, uRecetín wazalwa.
Zonke iiresiphi ezikwiwebhusayithi yethu zilungiselelwe ngabapheki abaziingcali kwisondlo sabantwana, ke abazali banazo zonke iziqinisekiso Ukulungiselela ikhitshi elisempilweni kwaye lisempilweni. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yale webhusayithi kwaye upapashe iiresiphi zakho nathi, kufuneka nje gcwalisa le fomu ilandelayo Kwaye siya kunxibelelana nawe ngokukhawuleza.
Ngaba uyafuna ukufumanisa Iqela lethu labapheki? Ewe, apha sibonisa abo bayinxalenye yeqela ngeli xesha kunye nabo bebesebenzisana nathi kwixa elidlulileyo.
Ndinesidanga kwezentengiso kunye nobudlelwane boluntu. Ndiyathanda ukupheka, ukufota kwaye ndonwabele abantwana bam abahlanu abancinci. NgoDisemba ka-2011 mna nosapho lwam safudukela eParma (e-Itali). Apha ndisenza izitya zaseSpain kodwa ndenza nokutya okuqhelekileyo kweli lizwe. Ndiyathemba ukuba uyazithanda izitya endizilungiselela ekhaya, zihlala zenzelwe ukonwaba kwabancinci.
Ndithembekile ngokungathandabuzekiyo ekhitshini kwaye ngakumbi kwindawo yokuhombisa. Kwiminyaka emininzi ndichithe ixesha lam ukulungiselela, ukufunda kunye nokonwabela iiresiphi ezininzi. Ndingumama wabantwana ababini, utitshala wokupheka wabantwana kwaye ndiyayithanda imifanekiso, ke yenza indibaniselwano elungileyo kakhulu ukulungiselela ezona zitya zibalaseleyo zeRisipe.
Ndinomdla wokupheka, kwaye umsebenzi wam okhethekileyo ziidyuli. Ndilungiselela ezimnandi, abantwana abangakwaziyo ukumelana nazo. Ngaba uyafuna ukwazi iiresiphi? Emva koko zive ukhululekile ukundilandela.
Ndazalelwa e-Asturias ngo-1976. Ndingummi womhlaba kwaye ndiphethe iifoto, izikhumbuzo kunye neendlela zokupheka ukusuka apha naphaya kwisutikheyisi yam. Ndingowosapho apho amaxesha amnandi, amnandi namabi, ethe tyaba etafileni, ke kuba oko ndandisemncinci ikhitshi lalikho ebomini bam. Ngesi sizathu, ndilungiselela iiresiphi ukuze abantwana abancinci bakhule besempilweni.
Igama lam ndingu-Irene, ndazalelwa eMadrid kwaye ndinethamsanqa lokuba ngumama womntwana endimthandayo ndinempambano nothanda ukutya, zama izitya kunye neencasa. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 bendibhala ngokubonakalayo kwiibhloko ezahlukeneyo zegastronomic, phakathi kwazo, ngaphandle kwamathandabuzo, iThermorecetas.com ime ngokucacileyo. Kweli hlabathi kubhloga ndiye ndafumanisa indawo entle eye yandivumela ukuba ndidibane nabantu abakhulu kwaye ndifunde ukungapheliyo kweendlela zokupheka kunye namacebo okwenza ukutya konyana wam kube kokona kulungileyo kwaye sobabini sikonwabela ukulungiselela nokutya izitya ezimnandi kunye.